Imbeko: Ifowuni enokusongelwa ngo-2020 kunye ne-5G ngo-2019 | I-Androidsis
Ii-smartphones ezisongelayo zibe lolunye lweendlela ezinkulu kule veki iphelileyo. Sikwazile ukumazi Huawei Mate X, i Galaxy Fold el I-alpha yeNubia, Ukongeza kwiprototype leyo I-TCL ilungiselele i-2020. Iimpawu ezininzi zibhengeze izicwangciso zazo zokuphehlelela iifowuni ezinokusongwa. Abanye babo baya kuyenza kulo nyaka. Nangona kwimeko yeMbeko kuya kufuneka silinde ithutyana.
Ibiyi-CEO ye-Honor echaze imephu yendlela yophawu lwalo nyaka nakulo nyaka uzayo. Kwifowuni yokusonga kuya kufuneka silinde de kube ngu-2020, nangona kulo nyaka sinokulindela i-5G yokuqala ye-smartphone ehambelanayo.
Izizathu zokuba inkampani isungule i-2020 ziyafana nezo ze-TCL. Ndinqwenela ukuba kuqala obu bugcisa buza kusekwa emarikeni. Ukongeza ukoyisa zonke iingxaki ezikhoyo kokubini kwicandelo lekhompyutha kunye nesoftware. Nje ukuba oku kwenzeke kwaye inkqubo yemveliso ibe lula, ziya kuba zitshiphu.
Gcina ukhumbula ukuba iNhlonipho uphawu lujolise kubaphulaphuli abancinci. Ke ngoko, ukumiliselwa kwesixhobo esinexabiso elimalunga ne-2.000 euros ayisiyonto inengqondo yokuqina. Kuba uluntu abajolise kulo alunalo uhlahlo-lwabiwo mali lokuba bakwazi ukuthenga imodeli yezi mpawu.
Kodwa ukuba ulinda ithutyana, kude kube ngu-2020, emva koko kuya kubakho imodeli ebiza kakhulu. Kuba ivumela ababhekisi phambili bahlengahlengisa iiapps zabo, ukongeza kulungelelwaniso lwenkqubo yokusebenza. Yintoni eya kuvumela esi sixhobo seMbeko ukuba sinike amava abhetele kubasebenzisi.
Ke ngale ngqiqo, kuya kufuneka silinde de kube ngunyaka olandelayo ukuze kuthiwe i-Honor folding smartphone. Nangona ukufika kwe-5G ukulinda kukufutshane kakhulu. Umphathi wefemu uthe ifowuni ehambelanayo iqinisekile ukuba iza kufika kulo nyaka. Kodwa okwangoku abakhange bazame ukunika umhla wokukhutshwa kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Imbeko yokumilisela i-smartphone esongekayo ngo-2020